Chee echiche n'ime igbe ahụ na Entrata Marketing Suite | Martech Zone
Ndị America na-ahọrọ ụlọ mgbazinye ka ọnụ ọgụgụ ndị di na nwunye nwere ụmụ na-ebelata n'ụzọ dị egwu na Millenials na-ahọrọ ịbụ ndị mgbazinye maka agagharị, nkasi obi, na ihe gbasara ego.
Na uptick na millennials saturating mgbazinye ahịa, ọ bụghị ihe ijuanya na-adịbeghị anya ọmụmụ chọpụtara na Pasent 74 nke ndị chọrọ ịgbazite ụlọ na-eji ịntanetị eji ekwentị mkpanaaka ha achọ ụlọ ha. Izipu saịtị ntanetị, njikarịcha weebụsaịtị webụsaịtị, mgbasa ozi mmekọrịta, na njikwa aha bụ uche nke ndị isi ụlọ. Agbanyeghị, ọnụ ụlọ na-agbanwe agbanwe mgbe niile nke ụlọ, ọtụtụ ndị bi na ya na mgbasa ozi na saịtị nyocha, yana ọtụtụ saịtị ntanetị mere ka ọ bụrụ ọrụ na-agaghị ekwe omume maka ndị njikwa na-aga n'ihu.
Sulọ Ahịa nke Entrata
Sulọ Ahịa nke Entrata bụ a sara mbara, ígwé ojii dabeere na ahịa ngwọta na-enyere ulo ụlọ ọrụ na-achịkwa nke ha ịnye ọnụahịa, aha, na postings niile mgbe ụgbọala ọzọ okporo ụzọ ha ihe onwunwe na ebe nrụọrụ weebụ.
Iche echiche n’ime Igbe ahụ
Ndị na-ahụ maka ihe onwunwe nwere ike ịchọta atụmatụ na ọrụ niile ha chọrọ iji zụọ ahịa ihe onwunwe ha n'ime usoro ikpo okwu Entrata. Ha ekwesighi inwe okike ma obu chee echiche n’azu igbe maka mkpa ahịa ha n'ihi na ikpo okwu anyị na-emere ha ha niile. Ndị a bụ onyinye:
Atụmatụ Portal ⓡ - Ebe nrụọrụ weebụ na-eme Nnukwu Ebu
ProspectPortalⓡ bụ azịza ngwanrọ webụsaịtị na-enye ohere nke ime ụlọ iji gosipụta ndepụta mgbazinye ha dị na ezigbo oge na weebụsaịtị ha. CMS na-enye ohere ka ihe onwunwe gbanwere foto, tinye mkpụrụ okwu SEO, gbakwunye ọdịnaya ọhụrụ ma gbanwee gaa na ntanetị ọhụrụ yana ịpị aka ole na ole na ntinye ntinye nke Entrata. Tụkwasị na nke a, saịtị anyị na-etinye ngwaọrụ ndị na-eduga (ntinye akwụkwọ kaadị ndị ọbịa, nyocha na nyocha, nhọrọ ịgbazinye ego n'ịntanetị, na nkata ndụ) iji nyere aka gbanwee okporo ụzọ weebụsaịtị wee bụrụ ndu.
Anyị nwere ike ịlele ọganiihu nke ụdị mkpọsa ahịa ọ bụla anyị na-agba, ma ọ bụ njikarịcha njin ọchụchọ, kwụọ ụgwọ ọ bụla ma ọ bụ ọbụlagodi mkpọsa akwụkwọ ozi. Site na ntanetị weebụ, ọnụ ọgụgụ nke kaadị ndị ọbịa na ọnụego ntụgharị, ikpo okwu na-agwa anyị ihe niile anyị kwesịrị ịma. Meghan Hill, Guardian Real Estate, ihe onwunwe 150 site na iji Portal Prospect
Ọnụ ụzọ ILS™ - Na-echekwa oge, na-ebelata ntinye data
Mpempe akwụkwọ ILS nke Entrata na-ejikwa azụmaahịa dị n'ịntanetị na-ejikwa faili ntanetịime akpaaka na isi ọrụ ntanetị niile. Ọ na - ewepu nkeji agbazinye ma melite saịtị niile na mgbanwe ọ bụla e mere na ọnụahịa na ọnọdụ ndị ọzọ.
Anyị na-eme nke ọma na ịnweta ozi anyị niile na Craigslist ma na-anọ na nsonaazụ ọchụchọ ahụ. Debanye ozugbo na Craigslist na-enweghị ngwa ọrụ na-agwụ ike ma na-ewe oge, yabụ na-esiri ndị njikwa ụlọ anyị ike biputere mgbe niile anyị jụrụ. Ugbu a, anyị na-enwetakwu okporo ụzọ gafee ngwongwo niile sitere na Craigslist n'ihi ya. Amber Ammons, Onye Nlere Azụmaahịa na Ọzụzụ, Companylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ngwongwo
Ọnụahịa Entrata™ - Right Price, Right Unit, Right Oge
Mpempe ọnụahịa Entrata nke Entrata dashboard na-enyocha ndụ mgbazinye ụlọ niile na asọmpi asọmpi iji kọwaa nyocha kachasị mma maka nnabata ọnụahịa maka obodo ụlọ. Ndị njikwa ụlọ nwere ike ịlele data ọnụahịa na interface na-enweghị nghọta na grafụ na eserese dị mfe iji gụọ na eserese maka nghọta nghọta nke ihe kpatara na etu ahịa si aga.
Onye na-enye ndụmọdụ™ - Dchọpụta Ihe Ndị Bi na Ya Chọrọ
Onye na-atụ aro na-achịkọta nyocha nke akụrụngwa si n'ofe weebụ gaa n'otu interface na dashboard nke Entrata nke gunyere usoro mgbasa ozi zuru oke ma nyochaa usoro njikwa ọdịnaya. Usoro mkpesa na-enyere ihe ahụ aka ịtụle arụmọrụ oge, na-egosipụta ike na adịghị ike nke njirimara ahụ.
N'oge na-adịbeghị anya, Entrata chịkọtara data banyere nghọta na ọnụ ahịa nke nyocha na mgbasa ozi mmekọrịta maka ihe karịrị ndị bi n'ụlọ 2,000.
Pịa ebe a iji gụọ ọmụmụ ihe zuru ezu
SEO Ọrụ - asingbawanye Nzipụta, Increbawanye okporo ụzọ
Anyị na-enye ndị ahịa anyị abụọ onpage na anya-peeji SEO azum iji mee ka ọhụhụ na okporo ụzọ gaa na weebụsaịtị ha. Tụkwasị na nke a, ndị otu anyị na-enye usoro njikwa aha njirimara dị iche iche n'ịntanetị nke na-agụnye ihe niile site na ịmepụta ọdịnaya mbụ iji jikọta peeji nke njirimara na saịtị mgbasa ozi a ma ama.
Onye ndu - Ọ dịghị ekpe ekpe
LeadManager na-akwado ngwongwo kaadị ndị ọbịa niile na dashboard Entrata. Ọ na-achịkọta ma na-ahazi isi mmalite niile na-eduga ma ọ bụrụ na ọ na-eje ije, oku ekwentị, ma ọ bụ nyocha ịntanetị iji nye maka ntinye dị mfe na nsuso nke akwụkwọ ozi na ndị ndu. Site na njide okporo ụzọ niile na ịkọ akụkọ weghaara n'otu ebe, ihe onwunwe nwere ike ịkpọtụrụ ndị ọzọ, tulee nsonaazụ, ma mee mkpebi amamihe na ebe ị ga-esi na-azụ ahịa dollar.
Tags: ndị na-akwụ ụgwọ ụlọentrataentrata ahịa ụlọenweghị isiNduruijikwa ihe onwunweijikwa njikwa ihe onwunweatụmanya Portalatụmanyaahịa ịre ụlọrenter ahịarenter seo azumrentersnkwanye ugwu